စားစရာရဖို့ စောင့်နေကြတဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ရိုဟင်ဂျာကလေးများ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ကော်မတီကဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ရီပတ်ဘလစ်ကင်အမတ် Ed Royce က ဆုံးဖြတ် ပြဌာန်းချက် ၉ ခုကို အတည်ပြု ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက တခုဖြစ်တဲ့ H. Con. Res. 90 မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးစု ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုကို ရှုတ်ချထားပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုအကူညီတွေ ချက်ချင်းပြန်ပေးခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
မကြာသေးခင်လတွေအတွင်းက ငယ်ရွယ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာမိခင်တွေ သူတို့နေအိမ်တွေ မီးရှို့ ခံရတာ၊ ကလေးတွေ ရေနစ်တာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်တယ် ဆိုတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားခဲ့ရသလို ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခွင့်ရေး အချိုးဖေါက်ခံရသူတွေ အဖြစ်အများက တွက်ဆကြတာမို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက် မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့၊ စစ်တပ်နဲ့အစိုးရက ဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ပြန်ခွင့်ပြုဖို့ အခု ဆုံးဖြတ်ချက်က တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီက ဥက္ကဋ္ဌ Ed Royce ရဲ့ ပြောကြား ချက်ကို ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီအဆိုပြုချက်ကို ဒီမိုကရက် ကော့ကပ်အဖွဲ့ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ နယူးရောက်ပြည်နယ် အောက် လွှတ်တော်အမတ် Joe Crowley နဲ့ Ohio ပြည်နယ် ရီပတ် ဘလစ်ကင် အောက် လွှတ်တော် အမတ် Steve Chabot တို့က ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ၁၁၅ ကြိမ်မြောက် အောက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ တောင်းဆိုချက်နဲ့ အတူ တိုက်တွန်းမှုတွေပါတဲ့ အချက် ၈ ချက်ပါဝင်ပါတယ်။
အရပ်သားတွေကို လုံခြုံရေးတပ်တွေက တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်း အရပ်သားတွေကို တိုက်ခိုက်နှေု အားလုံး ချက်ချင်း ရပ်ပစ်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ် အကြီး အကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ARSA အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်း ရှုတ်ချပြစ်တင်ထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လက်တုံ့ပြန်ရာမှာ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ၊ လူမျိုးစု ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးအသွင် သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် သတ်ဖြတ်မှုတွေလို အလွန်အကျွံ လက်တုံ့မပြန်ဖို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွ အတိုင်း အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့၊ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်ရွှေ့ပြောင်းရသူတွေကို လူသားချင်းစာနာမှု အကူညီတွေ အတားအဆီးမရှိပေးခွင့်ပြုဖို့အပြင် ဒုက္ခသည်တွေကို သူတို့လုံခြုံမှုမရှိစေတဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ ဥပဒေ၊ မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲပစ်တာမျိုးမရှိဘဲ သူတို့ရဲ့နေရပ်ရင်းကို သူတို့ဆန္ဒအလျှောက်ပြန်ခွင့် ပြုဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို ထောက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာခွင့်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းထားသလို ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ထွက်ပြေးလာသူတွေကို လက်ခံထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ အပါအဝင် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ပါ အမေရိကန်သမ္မတကို တောင်းဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေး ကန်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ